China Easy Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner orinasa sy mpamatsy | 品牌 名 / 公司 名
Easy Peel Aluminium Foil Induction Seal Liner
Ity dia singa iray fanamafisam-peo fanamafisam-peo iray, tsy misy sosona backup na faharoa, azo fehezina amin'ny fitoeran-drano amin'ny alàlan'ny masinina induction na vy elektrika mivantana. Izy io dia afaka manome tombo-kase henjana amin'ny plastika na kaontenera fitaratra azo esorina amin'ilay sombin-javatra iray manontolo, ary tsy misy ambina eo amin'ny molotry ny kaontenera.
Ny dikany sy ny fiasan'ny famehezana ny fanamafisana, izay matetika fantatra amin'ny hoe firakotra manarona, dia manondro ny fonosana sy ny lamba firakotra izay afaka mamokatra vokatra famehezana henjana amin'ny kaontenera. Eto, ireo kaontenera dia manondro tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika ary fitoeram-by. Misy karazana fonosana isan-karazany, ao anatin'izany ny satroka sikotra, saron-tsoavaly, satroka kapila, satroka crimping, satroka fanerena. Ireo fitaovana manarona dia manondro ireo fitaovana izay afaka manidy mafy ny sarom-bilany sy ny fitoerany, ireo fitaovana izay misy fepetra takiana sy miavaka dia tsy misy famoahana mihitsy. Mba hiantohana ny fahombiazan'ny entana fonosana dia miova tsy miova, ohatra, raha ny fonony ihany no ampiasaina ary tsy misy fisaronana eo ambanin'ny fonony, dia sarotra ny manatratra ny vokan'ny famehezana. Ny fiasan'ny sosona dia goavana
Akora: Aluminium foil, film, adhesives, ink, solvent, sns.
Layer famehezana: PS, PP, PET, na PE
Hatezerana mahazatra: 0.24-0.38mm
Diameter mahazatra: 9mm - 182mm
Manaiky sary miavaka, habe, fonosana ary sary izahay.
Ny vokatray dia azo zahana amin'ny endriny sy habe samihafa amin'ny fangatahana.
Ny hafanan'ny famehezana hafanana: 180 ℃ -250 ℃, miankina amin'ny fitaovan'ny kaopy sy ny tontolo iainana.
Fonosana: kitapo plastika - baoritra taratasy - paleta
MOQ: sombiny 10.000.00
Fotoana fandefasana: fandefasana haingana, ao anatin'ny 15-30 andro izay miankina amin'ny habetsahan'ny lamina sy ny famokarana.
Fandoavana: T / T Famindrana telegrafika na L / C Taratasy fampindram-bola
Fonosana madio indrindra.
Famehezana hafanana tsara.
Ny halavan'ny mari-pana famehezana malalaka.
Kalitao avo lenta, tsy mivoaka, anti-puncture, famehezana avo lenta, mora & matanjaka.
Sakan'ny rivotra sy ny hamandoana.
Fotoana fiantohana lava.
Rakotra aluminium foil ho an'ny fonosana samihafa, tavoahangy PET / HDPE / PP / PS / PVC ary tavoahangy fitaratra.
Ny famehezana induction heat dia manana fahaizana miorina amin'ny famehezana ny ankamaroan'ny kaontenera.
1. tombo-kase amin'ny freshness
2. Fisorohana ny famoahana be
3. Ahenao ny risika fanodinkodinana, fandotoana ary fandotoana
4. Manitatra fiainana talantalana
5. Mamorona tombo-kase hermetika
6. Sariaka amin'ny tontolo iainana
Previous: Asandrato 'N' Peel
Manaraka: Tapakila fanindronana hafanana iray miaraka amin'ny lamosina
Asandrato 'N' Peel